I-Polyethylene Glycol 20000 Peg20000
I-Polyethylene glycol 20000 - izakhiwo Lo mkhiqizo uyimpahla emhlophe eyi-granular. Iyancibilika emanzini, incibilikiswe kwamanye ama-solvents we-organic. Isixazululo saso sine-viscosity ephezulu ekuhlolweni okuphansi, futhi singacutshungulwa nge-calendering, extrusion nokuphonsa. Kuyinto resin thermoplastic nge ukuhambisana okuhle nezinye izinhlaka. Iyamelana nokuguguleka kwamagciwane futhi ine-hygroscopicity ebuthakathaka emkhathini. I-Polyethylene glycol 20000 - Okujwayelekile Lo mkhiqizo uyingxube ye-ethylene oxide an ...
I-Polyethylene glycol 10000 - izakhiwo Lo mkhiqizo uyimpahla emhlophe eyi-granular. Iyancibilika emanzini, incibilikiswe kwamanye ama-solvents we-organic. Isixazululo saso sine-viscosity ephezulu ekuhlolweni okuphansi, futhi singacutshungulwa nge-calendering, extrusion nokuphonsa. Kuyinto resin thermoplastic nge ukuhambisana okuhle nezinye izinhlaka. Iyamelana nokuguguleka kwamagciwane futhi ine-hygroscopicity ebuthakathaka emkhathini. I-Polyethylene glycol 10000 - Okujwayelekile Lo mkhiqizo uyingxube ye-ethylene oxide an ...
I-Polyethylene glycol 6000 ilungiswa yi-polymerization ye-liquid ethylene glycol emazingeni aphezulu okushisa, umfutho ophakeme noma umfutho ophansi. I-Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Igama lesiNgisi: macrogol 6000-992 lo mkhiqizo uyingxube ye-ethylene oxide namanzi polycondensation, ifomula yamangqamuzana i-ho (CH2CH2O) NH, lapho i-n imelela inani elijwayelekile lama-oxyvinyls. uhlamvu Lo mkhiqizo uyi-flake emhlophe e-waxy solid noma i-powder eyimbudumbudu, inuka kancane. Umkhiqizo uyancibilika emanzini noma ethan ...
I-Polyethylene Glycol 3350 Peg3350
I-Polyethylene glycol 3350 - isebenzisa i-Poly (ethylene oxide) resin isisindo esiphezulu se-moleopolymer esakhiwe ngokuvula indandatho i-ethylene oxide nge-catalysis eyindida. Owokuqala ubizwa nge-polyethylene glycol kanti owokugcina yi-polyoxyethylene. I-Polyethylene oxide (PEO) inezici ze-flocculation, ukuqina, ukukhipha kancane, ukuthambisa, ukusabalalisa, ukugcinwa nokugcinwa kwamanzi. Kufanele imithi, umanyolo wamakhemikhali, ukwenza iphepha, izinto zobumba, okokuhlanza, ...
I-Polyethylene glycol inezakhiwo ezahlukahlukene ngokuya ngesisindo sayo samangqamuzana, kusuka kuketshezi olungenambala nolunephunga olungenamphunga kuya ku-waxy solid. Lapho isisindo samangqamuzana singama-200-600, siwuketshezi ekamelweni lokushisa. Lapho isisindo samangqamuzana singaphezu kuka-600, kancane kancane siba semi-solid. Ngokwehluka kwesisindo samangqamuzana, izakhiwo nazo zihlukile. Kusuka kuketshezi lwe-viscous olungenambala nolungenaphunga kuya ku-waxy solid. Ngokwanda kwesisindo samangqamuzana, i-hygroscopicity dec ...
I-Polyethylene glycol ne-polyethylene glycol fatty acid ester zisetshenziswa kakhulu ezimbonini nezimonyo. Ngenxa yezindawo ezinhle ze-polyethylene glycol, ukuncibilika kwamanzi, okungaguquguquki, i-inertia yomzimba, ubumnene, ukuthambisa kanye nokumanzisa, isikhumba esithambile, umuzwa wokusebenzisa okuthunyelwe okumnandi, njll. I-viscosity, ukumuncwa komswakama nokwakhiwa kwemikhiqizo kungashintshwa ngokusebenzisa i-polyethylene glycol enamamaki wesisindo ahlukile. Polyethylene glycol (Mr <2000) nge relati ...
I-Peg-200: Ingasetshenziswa njengendawo yokuhlanganiswa kwezinto eziphilayo kanye nesithwali sokushisa esinezidingo eziphakeme. Ingasetshenziswa njenge-humectant, i-solvent engeza usawoti wezinto ezingaphili kanye nomlawuli we-viscosity embonini yamakhemikhali yansuku zonke. Isetshenziswe njenge-softener kanye ne-antistatic agent embonini yendwangu; Isetshenziswa njenge-ejenti yokumanzisa embonini yephepha nakwimboni yezibulala-zinambuzane. Ukuthambisa okuhle kakhulu, umswakama, ukusabalalisa, ama-adhesives, ama-antistatic agents kanye nezithambisi; Isicelo: Amakhemikhali ansuku zonke: izivikeli mzimba, umuntu ...